China Isigaba esinye sokuphela sokutsala uhlobo lwecentrifugal uhlobo lwempompo yomlilo yeFMPA kunye nabenzi IsiTongke
Ukuphela kwenqanaba lokutsala uhlobo lwe-centrifugal yempompo yomlilo ye-NFPA
Umzekelo No .: XBC-ES
Ukuphelisa ukutsala iimpompo ze-centrifugal zifumana igama lazo kwindlela ethathwa ngamanzi ukungena kwimpompo. Ngokwesiqhelo amanzi angena kwelinye icala lempepho, kwaye kwiimpompo zokutsala zokuphela tye, oku kubonakala ngathi kungena "esiphelweni" sompompo. Ngokungafaniyo nohlobo lokwahlulahlula ipayipi yokutsala kunye nemoto okanye i-injini zonke ziyahambelana, zisusa inkxalabo malunga nokujikeleza kwempompo okanye ukuqhelaniswa kwigumbi loomatshini. Kuba amanzi angena kwelinye icala lempepho, ulahlekelwa sisakhono sokubamba iibheringi kumacala omabini e-impeller. Ukuxhasa inkxaso kuya kuba kuvela kwimoto ngokwayo, okanye kwisakhelo samandla empompo. Oku kuthintela ukusetyenziswa kolu hlobo lwempompo kwizicelo zokuhamba kwamanzi amakhulu.
Ukhuseleko loMgangatho woQinisekiso
Ongatshatanga iqonga Impompo A.eziluncedo:
● Ngokudibeneyo, ubungqina bentshukumo kunye nengxolo ephantsi.
● Ububanzi obufanayo bokungena kunye nendawo yokuphuma.
● Ukuthwala i-C & U, lelona hlobo laziwayo e-China.
● Ukujikeleza kokupholisa ukuhamba kukuqinisekisa ukutywinwa komatshini ixesha elide
● Isiseko esincinci esifunekayo esigcina utyalo-mali kulwakhiwo ngama-40-60%.
● Itywina eligqwesileyo elingavuziyo
Ubume beCompact, uninzi lwezicelo zokwakha zale mihla.
♦ Impompo istili: istili esingajikeleziyo ngesinxibelelanisi sombhobho senzelwe kwaye senziwe ngabona baphakamileyo yimodeli yokutsala kule mihla, ngokungena kunye nangobubanzi obufanayo. Iiflanges zihambelana ne-GB4216.5, kwaye zixhotyiswe nge-Rp1 / 4 okanye i-Rp 3/8 yovavanyo loxinzelelo.
♦ Impeller: impeller evaliweyo, akukho mda kwicala lokujikeleza phantsi kobushushu bamanzi ngaphantsi kwe-80 ° C kunye ne-120 ° C.
Uyilo olukhethekileyo lweringi yetywina eqinisekileyo yokuqinisekisa ukutywina kunye nokusebenza okuthembekileyo.
Iiyunithi zeMpompo yoMlilo weTONGKE, Iinkqubo, kunye neeNkqubo eziHlalisiweyo
Ufakelo lweMpompo yoMlilo weTONGKE (ul evunyiweyo, Landela i-NFPA 20 kunye neCCCF) unikezela ngokhuseleko oluphezulu lomlilo kumaziko kwihlabathi liphela. Impompo ye-TONGKE inikezela ngenkonzo epheleleyo, ukusuka kuncedo lobunjineli ukuya kwinto yendlu ukuya ekuqaliseni kwentsimi. Iimveliso ziyilelwe kukhetho olubanzi lweempompo, ukuqhuba, ulawulo, iipleyiti ezisisiseko kunye nezixhobo. Ukukhetha impompo kubandakanya tyaba, emgceni kunye nesiphelo sokufunxa iimpompo zomlilo ze-centrifugal kunye neempompo ze-turbine ezime nkqo.
Zombini iimodeli ethe tye kunye nkqo zibonelela ngokufikelela kwi-5,000 gpm. Iimodeli zokutsala zokugqibela zisa amandla kwi-2,000 gpm. Iiyunithi ezikumgca zinokuvelisa i-1,500 gpm. Uluhlu lwentloko ukusuka kwi-100 ft ukuya kwi-1,600 ft ngeemitha ezingama-500. Iimpompo zixhotyiswa ngeenjini zombane, ii-injini zedizili okanye ii-injini zomphunga. Iimpompo zomlilo ezisemgangathweni zenziwe nge-Ductile yentsimbi eneentsimbi zobhedu. TONGKE unikezelo nokufakwa kunye nezincedisi ekucetyiswa yi NFPA 20.
Izicelo ziyahluka ukusuka kwimoto encinci, esisiseko yombane eqhutywa kwiinjini yedizili eqhutywa, iinkqubo ezihlanganisiweyo. Iiyunithi ezisemgangathweni zenzelwe ukuphatha amanzi amatsha, kodwa izixhobo ezizodwa ziyafumaneka kulwandle kunye nokusetyenziswa kolwelo olukhethekileyo.
Iimpompo zomlilo zaseTONGKE zinika intsebenzo ephezulu kwezolimo, kwiShishini Jikelele, kuRhwebo loKwakha, kwiShishini laMandla, kuKhuseleko loMlilo, kooMasipala nakwizicelo zeNkqubo.
Ugqibe kwelokuba uwunciphise umngcipheko womlilo kwindawo yakho ngokufaka i-UL, ULC efakwe kuluhlu lwempompo yomlilo. Isigqibo sakho esilandelayo yeyiphi inkqubo oza kuyithenga.
Ufuna impompo yomlilo eqinisekisiweyo kufakelo kwihlabathi liphela. Yenziwe yingcali enamava amakhulu kwicandelo lokhuselo lomlilo. Ufuna inkonzo epheleleyo ekuqaliseni kwentsimi. Ufuna Impompo yeTONGKE.
Ukubonelela ngezisombululo zokumpompa ITONGKE Ingakufezekisa Iimfuneko:
● Gqibezela amandla okwenziwa ngaphakathi endlwini
● Amandla ovavanyo oluqhutywa ngoomatshini nezixhobo ezinikezelwe ngumthengi kuyo yonke imigangatho yeNFPA
● Iimodeli ezithe tyaba zomthamo ukuya kwi-2,500 gpm
● Iimodeli ezithe nkqo zamandla ukuya kwi-5,000 gpm
● Iimodeli ezisemgceni zomthamo ukuya kwi-1,500 gpm
● Ukuphelisa iimodeli zokutsala zesikhundla ukuya kwi-1,500 gpm
● Iidrives: Injini yombane okanye injini yedizili
● Iiyunithi ezisisiseko kunye neenkqubo ezihlanganisiweyo.
Iiyunithi zeMpompo yoMlilo kunye neeNkqubo eziHlalisiweyo
Iimpompo zomlilo zombane kunye neeDiesel zeDrive Drs zinokubonelelwa ngayo nayiphi indibaniselwano yeempompo, ukuqhuba, ulawulo kunye nezixhobo zokudwelisa nezamkelweyo kunye nezicelo zenkonzo yomlilo ezidwelisiweyo. Iipakethe ezipakiweyo kunye neenkqubo zokufaka iindleko zempompo esezantsi kunye nokubonelela ngezi.
Umbane weMoto Impompo yomlilo yeqonga elinye
Injini yedizili Inqanaba elinye impompo yomlilo
Q. Yintoni eyenza impompo yomlilo yahluke kwezinye iintlobo zeempompo?
A. Okokuqala, bayazifezekisa iimfuno ezingqongqo zeNFPA Pamphlet 20, Underwriters Laboratories and Factory Mutual Research Corporation zokuthembeka kunye nenkonzo engaphumeleliyo phantsi kwezona meko zinzima nezifuna ngenkani. Le nyaniso iyodwa kufuneka ithethe kakuhle kumgangatho wemveliso ye-TKFLO kunye neempawu zoyilo zepremiyamu. Iimpompo zomlilo ziyafuneka ukuvelisa amaxabiso athile okuhamba (GPM) kunye noxinzelelo lwe-40 PSI okanye nangaphezulu. Ngaphaya koko, ezi arhente zikhankanywe apha ngasentla zicebisa ukuba iimpompo kufuneka zivelise ubuncinci i-65% yoxinzelelo kwi-150% yokuhamba okulinganisiweyo- kwaye lonke eli xesha lisebenza kwimeko yokuphakamisa iinyawo ezili-15. Amagophe okusebenza kufuneka abenokuthi intloko evaliweyo, okanye "i-churn," isuke kwi-101% iye kwi-140% yentloko elinganisiweyo, kuxhomekeke kwinkcazo ye-arhente yekota. Iimpompo zomlilo ze-TKFLO azinikezelwa ngenkonzo yokumpompa umlilo ngaphandle kokuba zihlangabezana nazo zonke iimfuno ze-arhente.
Ngaphandle kweempawu zokusebenza, iimpompo zomlilo ze-TKFLO zijongwa ngononophelo ziiNFPA kunye ne-FM ukuthembeka kunye nobomi obude ngohlalutyo loyilo kunye nolwakhiwo lwabo. Umzekelo wokugcina ingqibelelo, umzekelo, kufanelekile ukuba umelane novavanyo lwe-hydrostatic oluphinda kathathu uxinzelelo olusebenzayo ngaphandle kokugqabhuka! Ukuqulunqwa kwe-TKFLO kunye nokuyila kakuhle kuyasivumela ukuba sanelise le nkcazo kunye neemodeli zethu ezingama-410 kunye nama-420. Ukubalwa kobunjineli bokuthwala ubomi, uxinzelelo lwe-bolt, ukususwa kweshafti, kunye noxinzelelo lwe-shear kufuneka zingeniswe kwi-NFPA. kunye ne-FM kwaye kufuneka bewele ngaphakathi kwemida yokuzibophelela ukuqinisekisa ukuthembeka okukhulu. Okokugqibela, emva kokuba zonke iimfuno zokuqala zifezekisiwe, impompo ikulungele ukuvavanywa kokugqibela ukuze kungqinwe ngabameli abavela kuvavanyo lwe-UL kunye neFM yokusebenza kuya kufuna ukuba iidayimitha ezininzi zeempelesi ziboniswe ngokwanelisayo, kubandakanya ubuncinci kunye nobuninzi, kunye phakathi.
Q. Leliphi ixesha eliqhelekileyo lokukhokelela kwimpompo yomlilo?
A. Amaxesha aqhelekileyo akhokelayo aqhuba iiveki ezi-5-8 ekukhutshweni komyalelo. Sitsalele iinkcukacha.
Q. Yeyiphi indlela elula yokumisela ukujikeleza kwempompo?
A. Impompo yomlilo ethe tyaba-ecaleni, ukuba uhleli kwimoto ejonge kwimpompo yomlilo, ukusukela kule ndawo ibonakalayo impompo ingasekunene, okanye iwotshi, ukuba ukutsalwa kuvela ngasekunene nokukhupha usinga ngasekhohlo. Okuchasene kuyinyani kunxele, okanye ujikelezo lwendlela ejikelezayo. Isitshixo yindawo yokujonga xa sixoxa ngesi sihloko. Qiniseka ukuba omabini la maqela ajonge iseti yokumpompa kwicala elinye.
Q. Zinjani iinjinjini kunye nee-Motors kubungakanani beempompo zomlilo?
Ii-Motors kunye neinjini ezibonelelwe ngeempompo zomlilo ze-TKFLO zilinganiswa ngokwe-UL, FM kunye ne-NFPA 20 (2013), kwaye ziyilelwe ukusebenza nakweyiphi na indawo yempompo yomlilo ngaphandle kokugqitha kwinxalenye yenkonzo yemoto, okanye ubungakanani benjini. Musa ukukhohliswa ekucingeni ukuba iimoto zikalwe kuphela kwi-150% yesikhundla seplate. Kuqhelekile ukuba iimpompo zomlilo zisebenze kakuhle ngaphezulu kwe-150% yomthamo obekiweyo (umzekelo, ukuba kukho umbhobho wokucima umbane ovulekileyo okanye umbhobho owaphukileyo ezantsi komfula).
Ukufumana ezinye iinkcukacha, nceda ujonge iNFPA 20 (2013) umhlathi 4.7.6, ul-448 umhlathi 24.8, kunye noMgangatho wokuVunywa kweMigangatho yeempompo zoMlilo, iCandelo 1311, umhlathi 4.1.2. Zonke iinjini kunye neenjini ezibonelelwe ngeempompo zomlilo ze-TKFLO zilinganiselwe kwinjongo yokwenyani ye-NFPA 20, i-UL, kunye ne-Factory Mutual.
Ukusukela ukuba ii-motors zempompo yomlilo kungalindelwanga ukuba ziqhubeke ngokuqhubekekayo, zihlala zikulungele ukusebenzisa i-1.15 yeenkonzo zemoto. Ke ngokungafaniyo namanzi asekhaya okanye izicelo zempompo ye-HVAC, imoto yempompo yomlilo ayisoloko ilinganiswa "nokungagcwalisi kakhulu" kwigophe. Logama nje ungagqithi kwimoto yenkonzo ye-1.15, iyavunyelwa. Umahluko koku kuxa kusetyenziswa isantya esiguqukayo senjini yomsebenzi wombane wombane.
Q. Ngaba ndingasebenzisa ilopu yemitha yokuhamba endaweni yentloko yovavanyo?
A. I-flow meter loop ihlala isebenza apho ukuhamba kwamanzi agqithisileyo ngemibhobho esemgangathweni ye-UL Playpipe kungalunganga; Nangona kunjalo, xa usebenzisa imitha evaliweyo yokuhamba kwemijikelezo ejikeleze impompo yomlilo, usenokuvavanya iimpompo zokusebenza kwe-hydraulic, kodwa AKUVAVANYI unikezelo lwamanzi, nto leyo ibaluleke kakhulu kwinkqubo yempompo yomlilo. Ukuba kukho isithintelo kunikezelo lwamanzi, oku akuyi kubonakala nge-flow meter loop, kodwa ngokuqinisekileyo kuya kutyhilwa ngokuvavanya impompo yomlilo enamathumbu nemibhobho yokudlala. Ekuqaliseni kokuqala kwenkqubo yokumpompa umlilo, sihlala sinyanzelisa ukuhamba kwamanzi kwinkqubo ukuqinisekisa ukuthembeka kwenkqubo yonke.
Ukuba isilinganisi seemitha esihamba sibuyele kwakhona kunikezelo lwamanzi-njengetanki lamanzi elingaphezulu komhlaba-ke phantsi kwelo lungiselelo uya kuba nakho ukuvavanya zombini impompo yomlilo kunye nonikezelo lwamanzi. Qiniseka nje ukuba imitha yakho yokuhamba ilungelelaniswe ngokufanelekileyo.
Q. Ngaba kufuneka ndikhathazeke nge-NPSH kwizicelo zempompo yomlilo?
Kunqabile. I-NPSH (intloko elungileyo yokutsala) yinto ebaluleke kakhulu kwizicelo zorhwebo, ezinje nge-boiler feed okanye iimpompo zamanzi ashushu. Ngeempompo zomlilo, nangona kunjalo, ujongene namanzi abandayo, asebenzisa lonke uxinzelelo lomoya kwinzuzo yakho. Iimpompo zomlilo zifuna "ukutsalwa zizikhukula," apho amanzi afika kwimpompo ngamandla omxhuzulane. Uyakudinga oku ukuqinisekisa impompo eyi-100% yexesha, ukuze xa unomlilo, impompo yakho isebenze! Ngokuqinisekileyo kunokwenzeka ukufaka impompo yomlilo ngevalufa yonyawo okanye ezinye iindlela ezingezizo ezenziwayo zokuthambisa, kodwa akukho ndlela yokuqinisekisa i-100% ukuba impompo iya kusebenza ngokufanelekileyo xa ubizwa ukuba usebenze. Kwiipompo ezininzi zokutsala eziphindwe kabini, kuthatha kuphela iipesenti ezi-3 zomoya kwisingxobo sempompo ukunika impompo ukungasebenzi. Ngeso sizathu, awuyi kufumana umenzi wempompo yomlilo ovumayo ukuba semngciphekweni ngokuthengisa impompo yomlilo ngalo naluphi na ufakelo olungaqinisekisi "ngokufunxa amanzi" kwimpompo yomlilo ngalo lonke ixesha.
Q. Uya kuyiphendula nini imibuzo emininzi kweli phepha le-FAQ?
Siya kubongeza njengoko kuvela imiba, kodwa zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngemibuzo yakho!
Egqithileyo I-TWP uthotho lweselfowuni lwendlela ezimbini zeDiesel Injini yeDrive Vacuum yokuncoma indawo yokumpompa amanzi
Okulandelayo: Ukwahlula indawo yokutsala kabini NFPA impompo yomlilo ye-FM
Ukucaciswa kweMpompo yoMbane weTKFLO nkqo
Uhlobo lweMpompo Ukuphelisa ukutsala iimpompo ze-centrifugal ezifanelekileyo ngokufanelekileyo ukubonelela ngamanzi kwinkqubo yokukhusela umlilo kwizakhiwo, izityalo kunye neeyadi.
Umthamo Ukuya kwi-2500GPM (567m3 / hr)
Intloko Ukufikelela kwi-340feet (i-104meters)
Uxinzelelo Ukuya kwi-147 Psi (10 kg / cm2, 1014 KPa)
Amandla endlu Ukuya kwi-350HP (260KW)
Abaqhubi Iimoto zombane ezixwesileyo kunye neenjini zedizili
Uhlobo lolwelo Amanzi
Ubushushu Ambient ngaphakathi kwemida yokusebenza kwezixhobo ezonelisayo.
Izinto zoKwakha I-iron yentsimbi, iBronze ifakelwe
ubume bonikezelo: Injini yokuqhuba impompo yomlilo + ipaneli yokulawula + Impompo yeJockey Impompo yokuqhuba umbane wemoto + ipaneli yokulawula + impompo yeJockey
Esinye isicelo secandelo nceda unxibelelanise neenjineli zeTKFLO.
Impompo yoMlilo yeMpompo engenazintsimbi ...
Impompo yomlilo ye-multisatge ephezulu yempompo yomlilo